Laacibka Maxamed Saalax oo ka cadhoodey salaadii ciida oo aanu tukanin iyo sababta - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Laacibka Maxamed Saalax oo ka cadhoodey salaadii ciida oo aanu tukanin iyo sababta
Ciyaaryahanka Masaariga ah ee Maxamed Saalax ee u ciyaara kooxda Ingiriiska ee Liverpool ee dhawaanta uu horseedka ka ahaa inay ku guulaysato horyaalka naadiyada reer Yurub ayaa ka cadhoodey salaadii ciida oo aanu tukan. Masar ayay maanta kow u tahay ciidu.
Ciyaayahanka oo hadda jooga dalkiisa Masar kuna sugan tuuladiisa u dhow caasimada Qaahira ayaa dadku ku xoomeen gurigiisa taas oo booliisku dalbadey ciidan dheeraada si amnigiisa loo ilaaliyo.
Dadka ku soo xoomey gurigiisa ayaa ah dhamaan taageereyaashiisa mid walbana wuxuu rabaa inuu saxiix ka helo ama isla sawiro taasina waxay keentay amniga oo faraha ka bixi kara, xilli dalka ay ka jirto argagixisada kooxda gaaleynta ee Daacish.
Maxamed Saalax oo ka hadley ciida aanu tukanin ayaa si cadho u yiri ”Tani jacayl Kuma salaysna, waxana la yiraa xushmad daro iyo qofka oo laga qaadayo keli-joognimada, waana badownimo, waana tan aan gurigeyga uga bixi laahay si aan u tukado salaada.
Maxamed Saalaax ayaa Masar aad looga jecelyahay waxana lagu jeclaaday sadaqooyinka uu la baxo oo ay ku jiraan in tuulada uu jooga uu bixiyo kharashka ku baxa dadka is guursanaya, iyo baahiyaha dadka faqiirka ah oo Masar aad u badan.
Kuma koobna tuuladiisa wuxuuse si joogta ah wax uga gaystaa isbitaalada iyo xarumaha agoomaha ee dalka.
”Waan ka xumahay in anaga dartayo aad u tukan weydo salaada balse waan ku jecelahay ayuu yiri taageere isagu arki waayay kana mida dadka ku sugan dibedda guriga Maxamed Saalax.